Ụbọchị My Pet » 7 Kpamkpam Pụrụ Iche echiche maka A Ụbọchị
7 Kpamkpam Pụrụ Iche echiche maka A Ụbọchị
emelitere ikpeazụ: Oct. 20 2020 | 3 min agụ
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, anyị niile nwetara ụfọdụ ezi ụbọchị, ụfọdụ dull / dreary ndị, ụfọdụ jogburu onwe-atụ egwu kwesịrị ndị na Olileanya ụfọdụ kediegwu / na-akpali akpali dị. Ya mere, ihe na-eme ka a ụbọchị ịtụnanya? N'ezie onye ị na-ezute nwere ọtụtụ ihe ime na ya, Otú ọ dị m na-eche na e nwere ndị ọzọ na ya karịa nke ahụ. M na-eche ihe na-pụrụ n'ezie ime ka a ụbọchị kwụpụta bụ na-akọrọ ahụmahụ i nwere ọnụ, na njikọ a na-ewetara.
Nzukọ a mmanya ma ọ bụ ụlọ mmanya n'ihi na a mbụ na ụbọchị bụ nnọọ cliché na ebe na-enwe a nri dị mma, ọ nwere ike inwe na-agwụ ike mgbe ị na-eme ya kwa izu maka ụbọchị n'abalị na nwunye gị. Ma ọ bụ a mbụ ụbọchị ma ọ bụ a kwa izu 'ụbọchị abalị' n'ezie ose ya site chọrọ ịbanye na-eme ihe na-atọ ụtọ na aka na.
Ị maara na-akọrọ ahụmahụ ike njikọ n'etiti ndị mmadụ? Ọ na-arụ ọrụ dị ka nke a. Mgbe i nwere ụdị ọ bụla nke ahụmahụ ị ga na-enwe mmetụta uche na-aga na ya. Ya mere ihe atụ ma ọ bụrụ na ị na-abseil anya a dị n'elu ugwu ikekwe ị ga-enweta ụfọdụ nervousness, ikekwe ụjọ, adrenaline na elu. Ugbu a, mgbe anyị nwere na-akọrọ ahụmahụ na onye ọzọ, na anyị na-aga site yiri mmetụta uche ọnụ, a na-emepụta nkekọ. N'ihi na otu ihe anyị nwere ike ikwu na ibe na-enwe ihe na-ekwu okwu banyere, Otú ọ dị na ndị inyom e nwere ihe gbara ọkpụrụkpụ na-mere. Mgbe ndị inyom a na-akọrọ (mma ma ọ bụ na-akpali akpali) ahụmahụ na onye a na-akpọ chemical Oxytocin n'ezie Nwela wepụtara na anyị na ozu. Nke a bụ bonding hormone ga-eme ka anyị na-eche nso ka onye anyị na-enwe ahụmahụ ya na. Ugbu a di na nwunye na na ụfọdụ adrenaline si na-eme ihe na-akpali akpali, na ụfọdụ endorphins na serotonin si na-eme ihe na-atọ ụtọ, ma ọ bụ a mara mma heady mix. Mgbe ị na-ele anya na ya otú a ọ dị mfe ịhụ otú anyị pụrụ ada maka onye anyị na-akpa.
Ya mere, otú anyị pụrụ isi tinye nke a echiche nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Easy, na ị chọrọ ka atụmatụ ụbọchị na ike na-akọrọ ahụmahụ na-agụnye a fun na-akpali akpali mmewere. The ozi ọma bụ na nkịtị, kwa ụbọchị ndị na-adịghị na-agbalị ịdị anya-alikes nwere ike ka na ike ndị a ụdị ahụmahụ. Ma na nke a na-enye gị onu karịrị gị asọmpi. Olee otú ike na mma-enwe ike na ike a na ụdị ahụmahụ, na ihe a oké ụzọ ramp elu mma. Mgbe anyị na-eche na-agụsi mmetụta uche na bonding mmadụ na onye ọzọ anyị na-enwe mmasị na ha.
Ndị ọzọ abamuru nke ị na-ahọrọ ihe pụrụ iche na-fun gị ụbọchị bụ na ọ ga-agbaji ice, nke dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ a mbụ ụbọchị. Mgbe ị na-arụ ọrụ otú esi nri a Pizza ọnụ ị na-adịghị oge dị ukwuu maka mmetụta ihere. Na o nwere ike ikwe ka ohere maka na-anụ ahụ na flirty na ibe. Ọ bụ mgbe ike na-emetụ onye ị na o siri ike mara mgbe on a na ụbọchị na a mmanya, Otú ọ dị mgbe ị na-eme ihe ndị bara uru ọnụ na ọ bụ nnọọ mfe. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ọnụ na ọrụ na-dị mma ọbụna karị, na-echeta na-akọrọ ahụmahụ na-emepụta njikọ. Ma ọ bụrụ na ọrụ gị bụ ihe ntụrụndụ na ị na-ahụ onwe unu na-achị ọchị na nke a ga-enyere gị aka ma iji zuru ike.
Lee ụfọdụ echiche maka gị:
Isi nri ọnụ - Isi nri ọnụ pụrụ ịbụ a otutu fun. Ị nwere ike ma akwụkwọ a nri ihe ma ọ bụ esi nri ihe n'ụlọ (anya isi, ọ bụghị ihe a mbụ ụbọchị).
Ite - Ọzọ na nke a bụ a aka na nhọrọ na pụrụ ịbụ nnọọ sexy. Chee echiche nke film 'Mọ'. Na oké akụkụ bụ na a ga-a keepsake site na ụbọchị na ụdị ihe ọ bụla ị mere. Dị nnọọ jide n'aka gị ụbọchị maara na-eyi uwe ochie.
A ije na ịrịba ama mma - Anyị kwuru banyere eke a na-akọrọ ahụmahụ na ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ oge ma ọ bụ na ị bụ na a mmefu ego a ije ọnụ pụrụ ịbụ ezigbo. Ọtụtụ mgbe ndị mmadụ na-ahụ ya mfe iji zuru ike na-ekwu okwu mgbe ha na-eje ije. Ma ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ebe ahụ nwere mma mma nke a nwere ike tinye ahụmahụ. Otu n'ime ihe ndị kasị mma ụbọchị m mgbe nwere bụ buru ọhịa mushrooms na a oké ọhịa. Luckily m nwoke ahụ m bụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị maara nke ndị bụ oriri!
Ihe daring ka abseiling ma ọ bụ zorbing - N'ihi na adrenaline junkies nke a bụ zuru okè. Dị nnọọ jide n'aka gị ụbọchị maara ihe ị na-eme atụmatụ na ọ bụ maka ya tupu ị na-aga!
Gaa na n'ogige ụmụ anụmanụ - Ihe ọ bụla na ụmụ anụmanụ na dị ukwuu. Petting ụmụ anụmanụ nwere ike ina gị warmed elu na ọnọdụ maka petting onye ọ bụla ọzọ. Plus ọ na-enyere nyak na ihe nile dị mkpa hormone Oxytocin.
Ịnya anyịnya - Ịnya anyịnya pụrụ n'ezie ịbụ a ochi, na-a ịma aka ọ bụrụ na ị na-agbalị ya n'ihu. Ọzọ dị nnọọ elele onye gị bụ n'ihi na ihe ịma aka tupu ị na-aga ka ọ bụghị onye ọ bụla.
Art ngosi - Ọ bụrụ na ị ma dị ka nkà a pụrụ isi mee ka a cultured na fabulous Amalite Ijekọ ahụmahụ. Photo ngosi nwere ike ịbụ fun kwa.